Union Minister U Kyaw Tin attends 3rd Myanmar-Switzerland Foreign Office Consultations – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
After the meeting, Union Minister for International Cooperation hostedaworking luncheon to the Swiss delegation at the M Gallery Hotel, Nay Pyi Taw.
တတိယအကြိမ် မြန်မာ-ဆွစ်ဇာလန် နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်
(၄-၄-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
တတိယအကြိမ် မြန်မာ-ဆွစ်ဇာလန် နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ဆွေးနွေးပွဲကို နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်၌ ၄-၄-၂၀၁၉ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ဌာနအကြီးအကဲ H.E. Ambassador Raphaël Nägeli တို့က ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ရေး၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၉-၂၀၂၃) အသစ်အောက်မှ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ခရီးသွားလာရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းကျွမ်းကျင်မှု မြှင့်တင်ရေးကဏ္ဍတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုမြှင့်တင်သွားရေးကို ဆွေးနွေး အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကဏ္ဍများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု တို့ကိုလည်း ရှင်းလင်းအသိပေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အာဆီယံအပါအဝင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာ၌ အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း အမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဆွစ်ဇာလန် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား နေပြည်တော်ရှိ M Gallery ဟိုတယ်၌ အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။